Yaa lagu daah furaaya Tartanka Ciyaaraha D/Goboleedyada Ogoow? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Yaa lagu daah furaaya Tartanka Ciyaaraha D/Goboleedyada Ogoow?
Yaa lagu daah furaaya Tartanka Ciyaaraha D/Goboleedyada Ogoow?
Waxaa galabta lagu wadaa in Garoonka kubadda cagta ee Banaadir Stadium ay ka dhacdo ciyaar u dhaxeysa xulalka Gobolka Banaadir iyo Jubbaland, taasi oo ah cayaarta ugu horeysa ee Tartankan.
Tartanka ciyaaraha Dowlad Goboleedyada oo sanadkan ay ka qeyb galayaan xulalka Gobolka Banaadir, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxaa la qorsheeyay inuu socdo 8-da ilaa 22-ka bishan December.
Labadan xul ee galabta lagu Daah furayo Tartanka ayaa waxa ay saacadihii la soo dhaafay sameeyeen diyaar garowgoodii ugu dambeeyay ee ay ugu diyaar garoobayaan Tartanka CIyaaraha Maamul Goboleedyada.
Ka hor inta aysan ciyaarahan bilaaban ayaa dhammaan Madaxda maamulada dalka ka jira ee ka qeyb galaya Tartanka waxa ay dhiiragelin iyo bogaadin u sameeyaan ciyaartoyda Tartankan ka qeyb galeysa.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Thaabid Cabdi Maxamed oo xalay kulan la qaatay Ciyaartooyda ku ciyaareysa magaca Gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciyaartooyda looga baahan iney soo bandhigaan Ciyaar wanaag, wuxuuna kula dardaarmay iney gobolka Banaadir guulo u soo hooyaan.
Sidoo kale Madaxweynaha Maamul Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa casho sharaf magaalada Muqdisho ugu sameeyay cayaartooyda Xulka kubadda Cagta Jubbaland, wuxuuna sheegay in uu rajaynayo in Xulka kubada Cagta Jubbaland ay ku guulaystaan koobka maamul Goboleedyada dalka islamarkana ay muujiyaan niyad wanaag iyo habdhaqan wanaagsan marka ay garoonka ku jiraan.
Wasiirka Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa dhamaan cayaartoydka Tartankan ka qeyb galeysa ka dalbatay in ay soo bandhigaan ciyaar wanaag, ay ka heli karaan Daawadayaasha.
Bishii July ee sanadkii 2016-kii ayaa Tartankaii Dowlad Goboleedyada ee lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa ku guuleystay xulka Puntland, kadib markii ciyaarta kama dambeysta ay ka adkaadeen Jubbaland.